အပ်ငွေစာရင်းအသစ်များဖြစ်သည့် ငွေစာရင်းအကောင့်အသစ်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်အသစ်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်မေးလေ့မေးထရှိသောမေးခွန်းများ အပ်ငွေစာရင်းအသစ်များဖြစ်သည့် ငွေစာရင်းအကောင့်အသစ်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်အသစ်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်မေးလေ့မေးထရှိသောမေးခွန်းများ - KBZ Bank kbz bank
အပ်ငွေစာရင်းအသစ်များဖြစ်သည့် ငွေစာရင်းအကောင့်အသစ်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်အသစ်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်မေးလေ့မေးထရှိသောမေးခွန်းများ
May 11, 2021August 26, 2021
၁။ ငွေစာရင်းအကောင့်- ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အသစ်များ နှင့်ပတ်သက်သည့် အသေး စိတ် အချက်အလက်များမှာအဘယ်နည်း။
“ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း” ဆိုသည်မှာ ငွေအပ်နှံသူသည် ငွေသားသာလျှင် (အထူးကိစ္စရပ်) အပ်နှံနိုင် ပြီး အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့် အထူး သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။ အတိုးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘောဇဘဏ်က အခါ အားလျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် လက်ကျန်ပမာဏသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာ လျက် နေ့စဉ်လက်ကျန်ပေါ်တွင် တွက်ချက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ “ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း” ဆိုသည်မှာ ငွေအပ်နှံသူသည် ငွေသားသာလျှင် (အထူးကိစ္စရပ်) အပ်နှံ နိုင်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့် အထူး သတ်မှတ်ထားသောဘဏ်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သောငွေ စာရင်းမျိုးအတွက် မည်သည့် အတိုးကိုမျှ ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သောငွေစာရင်းမျိုးအတွက် cheque book ဝန်ဆောင်မှုရမည် ဖြစ်ပါ သည်။
၂။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အကောင့် များအား မည်သူတို့ ဖွင့် လှစ်နိုင်ပါသနည်း။
ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အသစ်များကို ဖွင့်လှစ် နိုင်သူများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –
• စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (DICA နှင့် NON-DICA နှစ်မျိုးလုံး)
• အဖွဲ့အစည်းများ (NGO, INGO, တက္ကသိုလ်များ, စသည်)
• တစ်ဦးချင်း – မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံအတွင်းအခြေစိုက်နေထိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသားများ (ဗီဇာသက်တမ်းရှိရမည်) နှင့် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများ
၃။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း ကို အဘယ့်ကြောင့် ဖွင့် လှစ်သင့်သနည်း။ အထူးအကျိုးအမြတ် မည်သို့ခံစားရမည်နည်း။
ဗဟိုဘဏ်ညွှန်ကြားချက်အရ ငွေသားပမာဏအမြောက်အများကို စီမံခန့်ခွဲလည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေရသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီတို့အတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး Customer များ အနေဖြင့် OTC ငွေသားထုတ်ယူမှုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ အလွယ်တကူ ငွေသားထုတ် ယူနိုင်မည့် အာမခံချက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ငွေစာရင်းအကောင့် အပ်ငွေစာရင်းအသစ်များတွင် ရရှိနိုင်မည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် (Product Information Note) တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါ သည်။
၄။ လက်ရှိ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် စာရင်းရှပ်အပ်ငွေစာရင်းအကောင့် များတွင် အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်ပါသလား။
မရရှိနိုင်ပါ။ ဗဟိုဘဏ်၏ညွှန်ကြားချက်အရ OTC ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ငွေသားထုတ်ယူခြင်းသည် ငွေစာရင်းအကောင့် အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းထားသည့် ငွေသား အတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း account များ၏ လက်ကျန်ငွေများမှာ စာရင်းပြောင်းနည်းဖြင့် ထည့်သွင်းထား ခြင်းများဖြစ်နိုင်သောကြောင့် လက်ရှိ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် စာရင်းရှင့်အပ်ငွေစာရင်း account များတွင် အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များ မရရှိနိုင်ပါ။
၅။ ငွေစာရင်းအကောင့်- ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း အဘယ်ကြောင့်မထားရှိပါသနည်း။
ဗဟိုဘဏ်ညွှန်ကြားချက်အရ ငွေသားပမာဏအမြောက်အများကို စီမံခန့်ခွဲ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေရသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ တို့အတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်းဖြစ်ပြီး Customer များ အနေဖြင့် OTC ငွေသားထုတ်ယူမှုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ အလွယ်တကူ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်မည့် အာမခံချက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
Customerများအနေဖြင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့် -စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများ ငွေသား ပိုမိုအပ်နှံလာသောကြောင့် Retail Customer များအပါအဝင် Customer များအားလုံးအတွက် အကျိုး အမြတ်ဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် OTC ငွေသားထုတ်ယူမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် များကို ပယ်ဖျက်ပေးရာတွင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းအသစ် မည်မျှဖွင့်လှစ်နိုင် မည်နည်း။
ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း များကို အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက် မရှိ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံးလက်ကျန်လိုအပ်ချက်ကိုမူ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Customer များ အနေဖြင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းတို့ကို အချင်းချင်းချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါသဖြင့် အဆိုပါအပ်ငွေစာရင်းအသစ်နှစ်မျိုးစလုံးအား ဖွင့်လှစ်ရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
၇။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း/ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အပ်ငွေစာရင်းအသစ်များကို မည်သည့်ဘဏ်ခွဲတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသနည်း။
ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း /ငွေစာရင်းအကောင့် -စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အသစ်များကို နိုင်ငံတစ်ဝန်း ရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
၈။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အသစ်များသို့ မည်သည့်ဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေသားအပ်နှံနိုင်မည်နည်း။
နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မည်သည့်ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတွင်မဆို ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အတွင်းသို့ ငွေသားအပ်နှံနိုင်ပါသည်။
၉။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း မှ မည်သည့်ဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေသား ထုတ်ယူနိုင်မည်နည်း။
သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းအသစ်များမှ ငွေသားထုတ်ယူခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေသားထုတ်ယူနိုင် သည့် ဘဏ်ခွဲများအရေအတွက်ကိုလည်း တိုးမြှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ငွေသားထုတ်ယူရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ဘဏ်မှပေးအပ်ခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် Relationship Manager မှ တဆင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း မှ ငွေထုတ်ယူမှု ပမာဏနှင့်အရေ အ တွက် ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
မရှိပါ။ Account မှထုတ်ယူနိုင်သည့် ပမာဏတွင်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ အပ်ငွေစာရင်း အမျိုးအစားအ လိုက် သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ ထားရှိရန်ဟူသည့် စည်းကမ်းချက်ကို လိုက်နာလျက် အပ်နှံထားသည့်ငွေကိုထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ငွေသားထုတ်ယူရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ဘဏ်မှပေးအပ်ခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် Relationship Manager မှ တဆင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၁။ ဘဏ်ခွဲတွင်ဖြစ်စေ၊ i/mBanking ဖြင့် ဖြစ်စေ လက်ရှိပုံမှန် Account များမှ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း (သို့မဟုတ်) ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း သို့ ငွေလွှဲနိုင်ပါသလား။ <br>
၁၂။ ဘဏ်ခွဲတွင်ဖြစ်စေ၊ i/mBanking ဖြင့် ဖြစ်စေ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း မှ လက်ရှိ Account များ အတွင်းသို့ ငွေလွှဲနိုင်ပါသလား။ မည်သို့လွှဲနိုင်မည်နည်း။ <strong>(New Cash Account to Normal Account Transfer)</strong>
လွှဲနိုင်ပါသည်။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းမှ လက်ရှိ Account များ အတွင်းသို့ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မည်သည့်ဘဏ်ခွဲတွင်ဖြစ်စေ၊ i/mBanking မှတဆင့်ဖြစ်စေ ငွေလွှဲနိုင်ပါ သည်။
၁၃။ ဘဏ်ခွဲတွင်ဖြစ်စေ၊ i/mBanking ဖြင့် ဖြစ်စေ ငွေစာရင်းအကောင့် အချင်းချင်း ငွေလွှဲနိုင်ပါသလား။ <strong>(New Cash Accounts to New Cash Accounts Transfer)</strong>
လွှဲနိုင်ပါသည်။ ငွေစာရင်းအကောင့် အချင်းချင်း မည်သည့်ဘဏ်ခွဲတွင်ဖြစ်စေ၊ i/m Banking မှတဆင့် ဖြစ်စေ ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။
၁၄။ Customer၏ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့် -စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အချင်းချင်းချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
၁၅။ Customer ၏ ငွေစာရင်းအကောင့် များနှင့် ပုံမှန်အပ်ငွေစာရင်းများ အချင်းချင်းချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင် ပါသလား။
၁၆။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း အတွက် အတိုးနှုန်းမှာ မည်မျှဖြစ်ပါသနည်း။
ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း အတွက် အတိုးနှုန်းကို (၁.၇.၂၀၂၁) မှစ၍ တစ်နှစ်လျှင် ၆ % သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
၁၇။ လက်ရှိ ပုံမှန် ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း အတွက် အတိုးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသလား။
မရှိပါ။ လက်ရှိ ပုံမှန် ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း အတွက် အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၂ % ဖြစ်ပါသည်။
၁၈။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများအား မည်သည့် ဘဏ်ခွဲတွင်မဆို စာရင်းပိတ်သိမ်းနိုင်ပါသလား။
စာရင်းပိတ်သိမ်းရန်အတွက် ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် မူလဘဏ်ခွဲသို့ သွားရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၉။ ငွေစာရင်းအကောင့် အပ်ငွေစာရင်းများနှင့် KBZPay အား ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
၂၀။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ကနဦး အပ်နှံငွေနှင့် အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ ပမာဏမှာ မည်မျှဖြစ်ပါသနည်း။
ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေ စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ကနဦးအပ်နှံငွေနှင့် အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂၁။ ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အတွက် Debit Card ဝန်ဆောင်မှုရှိပါသလား။
ရှိပါသည်။ Individual accounts များအားလုံးအတွက် Debit Card ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းကောင်း၊ Company များအတွက် Business Debit card များကို လည်းကောင်း မကြာမီ အခမဲ့ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၂။ MIRC Cheque စာအုပ်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ရက်မည်မျှစောင့်ရမည်နည်း။
ရုံးဖွင့်ရက် ၃ ရက် အတွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ MICR Cheque Book ကို Customer များ ဆောလျင်စွာရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၃။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များမှာ သာမန်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုအပ်သောအချက်များနှင့် ကွာခြားမှုရှိပါသလား။
ာခြားမှုမရှိပါ။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့် -စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ် ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများမှာ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။
၂၄။ Oငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ဝန်ဆောင်ခပေးရန်လိုအပ်ပါသလား။
၂၅။ လက်ရှိ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း account များအစား ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အသစ်ဖွင့်လိုပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
လက်ရှိ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း account များအား ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားရှိနိုင်ပြီး ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုပါက customer များသည် အဆိုပါအပ်ငွေ စာရင်းအသစ်များကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
၂၆။ Fixed Deposit Account သက်တမ်းစေ့ခြင်း/သက်တမ်းမစေ့မီတွင် Fixed Deposit account မှငွေကို ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းသို့ လွှဲနိုင်ပါသလား။
ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းသို့ ငွေသားသာလျှင် ထည့်သွင်းခွင့်ပြု ထားသည့်အတွက် Fixed Deposit Account မှ မည်သည့်ငွေ (အတိုးအပါအဝင်) ကိုမဆို လွှဲ၍မရပါ။
၂၇။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း များဖြင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသနည်း။
မည်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်မဆို Hotline No. 3212 ( MPT မှလွဲ၍ မည်သည့် Operator မဆို) နှင့် 09969933212( MPT Operator အတွက်သာ) (သို့မဟုတ်) Relationship Manager သို့လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၂၈။ ငွေသားပမာဏအမြောက်အများထုတ်ယူခြင်းအတွက် ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားမှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
လိုအပ်ပါသည်။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း မှ ငွေသားအမြောက် အမြား ထုတ်ယူရန်အတွက် စာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဘဏ်ခွဲက ပေးထားခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက် သွယ်၍ ဖြစ်စေ Hotline No. 3212 (MPT မှလွဲ၍ မည်သည့် Operator မဆို) နှင့် 09969933212 (MPT Operator အတွက်သာ) သို့ ဆက်သွယ်၍ ဖြစ်စေ Relationship Manager သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ် ဆောင် ရွက်နိုင်ပါသည်။
၂၉။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်ထားသည့် ဘဏ်ခွဲအစား အခြားသော ဘဏ်ခွဲတစ်ခုတွင် ငွေသားထုတ်ယူမည် ဆိုပါက မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်ခွဲများတွင်သာ ငွေသားထုတ်ယူခွင့်ပြုပါသည်။ သို့ရာတွင် သတ်မှတ်ထား သည့် ဘဏ်ခွဲတွင်မဟုတ်ဘဲ အခြားသောဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေသားထုတ်ယူရန်လိုအပ်ပါက စာရင်းဖွင့် လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲက ပေးထားခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ၊ Hotline No. 3212 (MPT မှလွဲ၍ မည်သည့် Operator မဆို) နှင့် 09969933212 (MPT Operator အတွက်သာ) သို့ ဆက်သွယ် ၍ဖြစ်စေ၊ Relationship Manager များထံသို့ ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
၃၀။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းမှ ငွေသားကို မည်သို့ ထုတ်ယူနိုင်ပါ သနည်း။
(က) (က) ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း အတွက် ချက်လက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (မူရင်း) တို့ဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
(ခ ) ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း အတွက် ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း Account Passbook ဖြင့် စာရင်းပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူလို ပါက စာရင်းပိုင်ရှင် လက်မှတ်ထိုးထားသော ငွေထုတ်ပုံစံ၊ စာရင်းပိုင်ရှင်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်တို့၏ မှတ်ပုံ တင်များ (မူရင်း) နှင့် ခေါ်ယူအပ်ျငွစာရင်း account Passbook တို့ဖြင့် ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော မူရင်း ဘဏ်ခွဲတွင်သာ ငွေသား ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃၁။ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း သို့ ငွေသွင်းရန်အတွက် Appointment ရယူရန် လိုအပ်ပါသလား။
မလိုအပ်ပါ။ Customer များသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်ခွဲ (သို့မဟုတ်) မည်သည့်ဘဏ်ခွဲတွင်မဆို Appointment ရယူရန် မလိုအပ်ပဲ ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းသို့ ငွေသား ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
၃၂။ ငွေသားလက်ခံခြင်း (သို့မဟုတ်) ပေးပို့ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို တောင်းခံနိုင်ပါသလား။
ငွေသားလက်ခံခြင်း (သို့မဟုတ်) ပေးပို့ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုအတွက်– ရုံးခန်း/သိုလှောင်ရုံ/စက်ရုံ/ဆိုင် တို့မှ ငွေသားပေးပို့သည့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အစီအစဉ်ပြုလုပ်နိုင်ရန် Relationship Manager ထံသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၃၃။ ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း/ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်းအတွက် မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ထပ်မံရရှိနိုင်ပါသနည်း။
• MPU Debit card/ Business Debit card အခမဲ့
• ATM card green PIN ထုတ်ပေးခြင်း/ထပ်မံထုတ်ပေးခြင်းအခမဲ့
ငွေစာရင်းအကောင့်-ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း အတွက် အခြားသော ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း Account များနှင့် ကွဲပြားခြားနားသည့် အထူး တံဆိပ်တုံးရိုက်နှိပ်ထားသော ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း Passbook ကိုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေစာရင်းအကောင့်-စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း/ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း အသုံးပြုသူများသည် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို ထပ်မံရရှိ မည် ဖြစ်ပါသည်။
• Account to Account transfers အခမဲ့
Cash Accounts အသုံးပြုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ စာရင်းပြောင်းခြင်းများကို အခမဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
– ဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေစာရင်းအကောင့် အချင်းချင်း ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း။
– ဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေစာရင်ူအကောင့် မှ မည်သည့်အခြားသောငွေစာရင်းသို့မဆို ငွေလွှဲ ပြောင်းနိုင်ခြင်း။
• လစဉ် Bank Statement email မှတဆင့် အခမဲ့
• Balance Certificate အခမဲ့
• i/mBanking များ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း – Customer များအနေဖြင့် digital banking ဝန်ဆောင်မှု များဖြစ်သည့် i/mBanking ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် i/mBanking ကို အခမဲ့မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ Remote Token device တောင်းခံမှုအတွက် သာလျှင် အခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃၄။ ငွေစာရင်းအကောင့်သစ်နဲ့ Operating Account က ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲ။
ယင်းအကောင့် (၂) ခုမျိုးစလုံးက တစ်ခုတည်းပါပဲ။ အကောင့်အမည်ပဲ ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Operating Account ဖွင့်လှစ်ပြီးထားဖြစ်ပါက ငွေစာရင်းအကောင့်အသစ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကို အလိုလျောက်ရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
KBZ ဘဏ် ငွေစာရင်းအကောင့် အသစ်- ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း အထွေထွေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များရန်ကုန်မြို့ရှိ customer များအတွက်ချက်လက်မှတ်စာအုပ် အမြန်တောင်းခံ ထုတ်ယူနိုင်မည့် စင်တာ